Sonke ukuphila ezweni lanamuhla, isici esiyinhloko okuyinto inombolo omkhulu izimpahla ezahlukene kanye nezinsizakalo. Ukuze uzulazule kahle kule ukwehluka, izwe ngalinye igcina uhla ethile, okubandakanya ngokuphelele zonke izinhlobo zezimpahla kanye namasevisi emakethe. Leyo ngaphambilini umkhiqizo line ikuvumela ukuba hhayi kuphela owazi kahle imikhiqizo ukuqeda abasebenzisi, kodwa futhi yasetshenziswa ngempumelelo abaqashi ukuze bafeze imisebenzi yebhizinisi.
Vele ngaphezu konyaka odlule 7 Juni 2011 WaseRussia Ministry of Economic Development yomthetho entsha ku ukwamukelwa ngesilwane esifuywayo amasevisi, izimpahla kanye usebenzela izidingo ekupheleni amakhasimende kwavunyelwana. Ngenxa yalokhu yonke impahla ekhiqizwa ezweni lakithi, ukuze uthole othize wekhodi OKDP lapho sekungenzeka ukuba ukuqhuba imisebenzi ngamazwe ngempumelelo. Zonke izimpahla namasevisi zihlelwe ngendlela ethile, futhi umphumela waba ukuthi usesha into ethile iye lula kakhulu.
Kahle ihlelwe umkhiqizo line kwenza kube lula ukuzula ezahlukene imikhiqizo owethulwe kanye nezinsizakalo hhayi kuphela kumakhasimende, kodwa futhi amakhasimende. Obusha bama-computer nobuchwepheshe namuhla zihlanganisa isofthiwe yakamuva, okuvumela ukuqhuba ezenzakalelayo ukuqoshwa kwezimpahla kanye ukukhumbuza umnikazi ngesikhathi mayelana nokuthi iziphi izinhlelo zazo siphele.
Ukwethulwa kwe-ibanga elisha manje ivumela ukugwema ukuhlukunyezwa kwabantu abaningi, njengoba umthetho omusha ukhombisa ukuthi kungenzeka endalini evulekile elektroniki yawo wonke amazinga ikhasimende. Kwaba intuthuko enkulu ukusetshenziswa nokusatshalaliswa ubuchwepheshe bamuva ngogesi futhi ibhizinisi Inthanethi. Izinto zesimanje umkhiqizo line manje ivumela ukubamba endalini yomphakathi, yokufaka ama-oda ovela kumphakeli olulodwa, futhi abambalwa ngesikhathi. Ngenxa yalokho, sithola yokuncintisana okufanelekile, okuholela izinzuzo osomabhizinisi nje kuphela kodwa futhi umsebenzisi sekupheleni. Phakathi kwezinye izinto lapha ukuthi intengo langempela kwezimpahla ngaphandle markups eyengeziwe kanye ikhomishini balamuli ezahlukene.
Ububanzi kwezimpahla, imisebenzi, izinsizakalo kanye neminye imisebenzi ku-elekthronikhi futhi ikuvumela ukuba kakhulu ukunciphisa isikhathi edingekayo ukuthola umthengi. Phela, isikhala Inthanethi ikuvumela ukudayisa ngesikhathi sangempela amahora angu-24. Futhi kusukela osukwini okushicilelwe ngalo iDemo endalini electronic uqondane imodi nombuzo we izingcaphuno, yonke inqubo ibhizinisi senzeka esikhathini esifushane.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngesilwane esifuywayo evunyiwe kwezimpahla akubandakanyi umsebenzi, amasevisi noma imikhiqizo amakhasimende ukuthenga izidingo zabo siqu. Nokho, lokhu akusho ukuthi abanjalo izimpahla banqatshelwe ukubeka ku indali electronic, njengoba uhlelo evumela ukubeka zonke izinhlobo imikhiqizo ekhona ukudayiswa. I ngesilwane esifuywayo entsha umane uyabaxosha, futhi umphumela waba ukuthi asebenze izimpahla namasevisi lula kakhulu.
Kufinyeta bonke ngenhla, kumele kugcizelelwe ukuthi umthetho onjalo lula kakhulu umsebenzi nokuxhumana abathengi kanye nabathengisi nomunye ekuqhubeni umsebenzi. Kuleli zwe lanamuhla kubaluleke kakhulu ukuba naso isikhathi sokuqoqa izimpahla zabo bazosidayisa ngaphambi kokuba wadalula izimbangi, ngoba kukhona isimiso ngempela esebenzayo - impumelelo kusho ngesikhathi. Ngesilwane esifuywayo kwezimpahla avunyelwe olongahle aphathe izimpahla namasevisi babe kwalinciphisa kakhulu Ububi isici womuntu, futhi bavunyelwe ukuba baphile imisebenzi yokuhweba kuphumelele kakhulu.
Izibalo okuzenzakalelayo nge abathengi kanye namakhasimende - namuhla uphawu
"I-Excidzhad" (deferaziroks): ama-analogues, intengo. Lapho ukuthenga i-Adwizard
Izinambuzane nezifo utamatisi
Gymnastics zamehlo ku Norbekovu - ukusetshenziswa noma udoti isikhathi?
Yini okufanele ibe upende zibe yizinkuni Ingaphandle
Abazalwane bakaMario: uhlamvu lukaLuigi
Anapa amahhotela nge lolwandle yangasese. Uphenyo Anapa amahhotela nge lolwandle yangasese